Dagaal feer ah oo xiiso leh oo caawa ka dhacaya magaalada London - BBC News Somali
Dagaal feer ah oo xiiso leh oo caawa ka dhacaya magaalada London
Image caption Anthony Joshua waa 27 jir halka Wladimir Klitschko oo yahay 41 jir
Caawa waxaa jira dagaal hadda waa dagaal faraha looga gubtay, laakiin waa dagaal feer ah, waxaa garoonka Wembley saacadda Afrikada bari marka ay tahay 12-ka saqda dhexe kuna beegan saacadda London 10-ka fiidnimo dagaal feer ah ku dhexmari doono labada feeryahan ee caanka ah ee haysta biladda dahabka ee Olympic-da oo kala ah Anthony Joshua oo ah British 27 sano jir iyo rug cadaaga xagga feerka Wladimir Klitschko oo bishii hore 41 jir noqday.
Labada nin maalmahan ayaa la isku xuuxinayey oo saxaafadda ayaa aad u hadal haysa tartanka feerkooda, waxaadna ka garanaysaa waxaa garoonka Wembley isugu imaan doono 90 kun oo daawadayal ah oo dunida oo dhan uga yimid daawashada feerka, waxaa kale oo Telefishinada kala socon doona malaayiin oo qof aduunka oo dhan.
Feerkan waa tartanka miisaanka culus ee IBF waxaana kii badiyaa uu tartami doonaa feerka miisaanka culus ee aduunka ee WBA.
Image caption Klitschko waxaa November 2015 ka badiyey Tyson Fury
Arinta xiisaha leh waxay tahay labada nin ee caawa dagaalamaya waxaa u dhaxaysa da'a 14 sano ah 27 sano oo uu jiro Joshua, ninka la dagaalamaya ee Klitschko intaas oo dhan tartan feer ayuu ku soo jiray.Wiilkan Anthony Joshua wuxuu ku dhashay degmada Watford ee duleedka magaalada London waxaa dhalay qoys asalkoodu yahay Najeeriyaan gaar gaar ahaan qowmiyada Yuruba-ha. Feerka aad ayay isugu diyaareen labda nin waase la arki doonaa ninka kala reebta gacantiisa kor loo taago ee guulaysta.
Image caption Joshua oo tababar ku jira